Miloloha amin'ny solosaina finday ... sy ireo safidy hafa | Martech Zone
Miloloha amin'ny solosaina finday… sy ireo safidy hafa
Asabotsy 24 Febroary 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Mampihomehy loatra raha tsy zaraina:
Mampiasa Technorati's API ary PHP
OpenID Napetraka ary eo amin'ny Vonona!
24 Feb 2007 tamin'ny 10:56 maraina
(Ary tsara ny mahita fa tsy isika irery no rakotra lanezy)
24 Feb 2007 tamin'ny 10:59 maraina
Nanaiky! Nijery ny sarintanin'ny toetr'andro aho halina ary manana oram-panala betsaka kokoa izy ireo any Andrefan'ity. Aiza daholo ny fiakaran'ny maripana? Mahazo fiara lehibe kokoa aho!